Amboary ny tenanao iPad (I): Home button | Vaovao IPhone
Tongasoa eto amin'ny lahatsoratra vaovao izay Hatoronay anao ny fomba fanamboarana ny bokotra iPad an-trano faha-2 sy faha-3 misaotra ireo mpitarika ny iFixit amin'ny fomba fanamboarana ny bokotra an-trano. Mihatra amin'ny ity torolàlana ity iPad 2 sy 3 kinova Wi-Fi ary kinova Wi-Fi + 3G. Alohan'ny hanombohako dia hanome torohevitra sy fampitandremana ho anao aho:
Ity toro-lalana ity dia atolotra anao raha tsy raikitra ny bokotra an-trano miaraka amin'ny famerenana amin'ny laoniny
Manoro hevitra anao ny hanatanteraka an'ity torolàlana ity amin'ny iPads izay tsy misy ny antoka, satria raha esorinay ny iPad, dia foana ny antoka;
Mariho fa amin'ny dingana sasany, manova kely amin'ny iPad 2 miaraka amin'ny iPad 3, azafady araho tsara ireo dingana
Ny IPad Update dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahasimban'ny iPad-nao ary izay rehetra voatanisa etsy ambany dia nalaina avy amin'ireo torolàlana iFixit.
Atombohy amin'ny inona no ilaina hanatanterahana ny fanamboarana, azonao atao ny mividy azy amin'ny iFixit.
bokotra iPad 2 sy 3 Home (takiana)
iFixit Guitar Picks napetraka amin'ny 6: Picks izy ireo (iPad 2)
Phillips # 0 Screwdriver
Phillips 00 Screwdriver (biriky)
Fitaovana fanokafana plastika (iPad 2) Fitaovana plastika hanokafana ny iPad izy ireo.
Spudger (totohondry ho an'ny elektronika)
FANAMARIHANA: Ny iOpener dia tsy azo hafanaina imbetsaka misesy, mila mamela 2 minitra eo anelanelan'ny hatsiaka ianao ary averina miverina.
Fanamboarana bokotra an-trano iPad 2 sy 3 (Wifi sy Wifi + 3G)
Manafana ny iOpener amin'ny heriny iray minitra. Ny iOpener dia hanasarahana ny kasety adhesive manodidina ny efijery iPad.
Izahay dia maka ny iOpener avy ao anaty microwave ary mametraka azy ao amin'ny zoro havanan'ny iPad mandritra ny 90 segondra.
Maka iray izahay Fitaovana fanokafana plastika ary apetaho eo amin'ny zorony ambony havanan'ny iPad manodidina ny 5 santimetatra avy eo ambony, izay misy elanelana kely, hararaotinay ity banga ity hanesorana ny touchpad. Izahay dia manao hetsika mandra-pialan'ny efijery.
Mitazona ny fitaovana fanokafana plastika ao anaty banga, maka iFixit Guitar Pick (pick) isika ary mampiditra azy eo akaikin'ny banga, eo akaikin'ny fitaovana teo aloha.
Esorinay ny fitaovana fanokafana plastika (fitaovana hanokafana ny iPad) ary apetrantsika ny Guitar iFixit eo amin'ny 0.1 sentimetatra eo ho eo.
Mamerina mamerina ny iOpener izahay ary mametraka azy eo ambany, izay misy ny bokotra Home, amin'ny fomba mitovy amin'ny dingana 1.
Eo am-pamoahana ny plastika amin'ny iOpener, mamindra ny Guitar iFixit (pick) manaraka ny zoro mety isika. Tsy maintsy manao hery kely isika, mitandrema, raha tonga amin'ny takelaka LCD ny fitaovana dia afaka mameno ny écran manontolo amin'ny dity isika ary tsy mahazo aina rehefa mampiasa iPad.
Raha hitantsika fa ny iFixit Guitar (pick) dia tsy mihetsika amin'ny ilany ankavanana, dia averinay ilay iOpener ary apetrantsika amin'ny ilany ankavanana izy (aorian'ny hafanaina ny ambany).
Mametraka Guitar iFixit iray hafa izahay eo amin'ny farany ambany ankavanan'ny iPad mba hisorohana ny fametahana ilay dity ary averinay ao anaty micro-microwave ilay iOpener ary apetraka eo ambonin'ny iPad, misy ny fakantsary.
Mitandrema amin'ny dingana manaraka satria akaiky ny antena Wi-Fi izahay ary raha mikasika azy io dia mety hanimba ity fifandraisana ity ary tsy afaka manamboatra azy isika.
La Guitar iFixit (pick) napetrakay tao amin'ny faritra ambany ankavanana, ahetsika tsara izy io amin'ny alàlan'ny faritra ambany amin'ny iPad. Aza atsofoka any ivelan'ny zorony ambany ny iFixit Guitar, mety hanimba ny antena Wi-Fi izany, araka ny nolazaiko anao teo aloha. Rehefa manodidina ny 5 centimetatra eo amin'ny bokotra an-trano eo amin'ny zorony ambany ankavanana ianao, dia esory ny Guitar iFixit izay miala kely ao anatin'ny iPad, izany dia hisorohana ny fahatapahan'ny Wi-Fi antena.
Rehefa akaiky ny Button Home isika dia apetratsika ny iFixit Guitar (pick) teo amin'ny halaliny teo aloha ary hifindra miankavanana isika nefa tsy hatahotra, fa mitandrema kosa amin'ny antena Wi-Fi. Mamaky ny Button Home izahay amin'ny alàlan'ny fanesorana ny pick gitara ary hamerina azy io ary esorinay ny adhesive avy amin'ny ilany havia ambany amin'ny iPad. Raha hitantsika fa tsy mihetsika ny Guitar iFixit dia averinay indray ilay iOpener ary apetrakao amin'izay alehantsika rehetra.
Avelantsika eo akaikin'ny Button Home ny iFixit Guitar (pick), niraikitra lalina.
Tadidinao ve fa namela Guitar iFixit tao anaty efajoro mahitsy isika? Izahay, mametraka Guitar iFixit iray hafa eo ambonin'ilay teo aloha teo amin'ny zoro mety hiakatra amin'ny tampon'ny iPad ary esory ny dity avy eo.
Manafana ny iOpener indray izahay ary apetratsika amin'ny ampahany sisa io: ny tapany havia.
Isika dia mamindra ny Guitar iFixit (ilay nisafidy) amin'ny alàlan'ny sary etsy ambony mitandrina amin'ny fakantsary (izay nalainay kely rehefa tonga tany aminy, toy ny tamin'ny antena Wi-Fi), raha mihamafy ny adhesive dia esorinay ny iOpener avy amin'ilay ampahany havia ary avereno eo amboniny 90 segondra.
Esorinay ny iOpener eo amin'ny frame havia ary afindra ny Guitar iFixit manaraka ity zana havia hahatratra ny zoro ambany havia amin'ny iPad ity izay manetsika ny pika hanala ilay dity.. Avelantsika eo amin'ny ilany havia havia amin'ny iPad iray manontolo ny safidy, eo amin'ny ilany havia ambany.
Mitandrema amin'ny tariby izay mampifandray ireo faritra roa amin'ny iPad, apetraho amin'ny faritra havia ambany ny fisafidianana ary manandrana tsy manapaka ny tariby. Miasa am-pitandremana, ny fanapahana io tariby io dia tsy azo ovaina.
Raisinay ny sisin-tany mitokana eo amin'ny ilany ankavanan'ny iPad ary atosika hiverina (amin'ny tànana ankavanana eo amin'ny ankavanana ambany ary ny iray amin'ny ankavanana ambony). Raha misy adhesive tavela, tapaho amin'ny iFixit Guitar.
Esorinay ny visy mitazona ny efijery LCD (aseho amin'ny sary) miaraka aminay Phillips 00 Screwdriver (biriky)
Tena mitandrina sy miaraka amin'ny fanampian'ny a awl (spudger), afindraintsika ilay ampahany izay manondro ny sary (toy ny hoe boky) mankamin'ilay sary nesorintsika teo aloha, mitandrema fa mety ho tapaka ny tariby misy.
iPad 2: Miaraka amin'ny Fitaovana fanokafana plastika atsofontsika ireo takelaka manamboatra ireo takelaka roa ZIF amin'ilay kasety niomerika. Hamarino tsara fa miantehitra amin'ny takelaka mitazona ny hinge ianao fa tsy amin'ny faladiany anatiny.
iPad 3: Miaraka amin'ny tendron'ny a spudger (totohondry), esorinay ny kasety adhesive izay manarona ny mpampitohy ny tariby kofehy LCD.
iPad 2: Mampiasa ny sisin'ny a Fitaovana fanokafana plastika (Fitaovana misokatra iPad) hialana amin'ny tariby digitizer. Sintomy tsara amin'ny sisiny ankavanana ny tariby digitizer.
iPad 3: Atsanganay ny kapila fihazonana amin'ny mpampitohy tariby ZIF sary ny efijery LCD anay. Misintona ny tariby amin'ny rantsantanantsika isika.
iPad 2: Isika misintona ny tariby digitizer mivantana avy amin'ny faladianao roa
iPad 3: Tsy mikasika ny eo alohan'ny efijery, atsanganay ny tontonana aloha hahafahana miasa.
iPad 2: Esorinay ny fivorian'ny tontonana eo aloha. Ny tariby nesorintsika dia tsy maintsy mihetsika rehefa mamindra ny efijery. Manandratra ny efijery isika amin'ny alàlan'ny fanolorana moramora ny takelaka eo alohan'ny iPad. Mitandrema mba tsy hikorontana ny tariby digitizer amin'ny fisehoana na ny valizy miverina.
iPad 3: Raha ilaina, qMampiasainay ilay kasety adhesive mitazona ny tariby vita amin'ny digitizer. Asandratray ny kapila mitazona ny kasety ZIF amin'ny tariby digitizer.
iPad 2: Ao amin'ilay ampahany nesorinay, ny tapany eo aloha dia ny Bokotra an-trano, mba hanamorana ny fanoloana, izahay no manafana ny iOpener amin'ny microwave ary apetrantsika eo amin'ny farany ambany amin'ny frame anoloana mba hanoloana ny bokotra Home.
iPad 3: Miala amin'ny spudger (awl) izahay dia mamaha ny adhesive eo ambanin'ny tariby misy ny digitizer. Izahay dia misintona ny tariby mandra-pivoakany avy ao amin'ny faladiany anatiny.
iPad 2: Miaraka amin'ny Fitaovana fanokafana plastika Esorinay ny adhesive avy eo amin'ny ilany havanana sy havia amin'ny bokotra Home, ary nakarina ireo takelaka.
iPad 3: Miaraka amin'ny totohondry indray, esorinay hiverina ny tariby digitizer avela maimaimpoana ny anoloana ny iPad. Esorinay ny tontonana eo aloha.
iPad 2: Miaraka amin'ny Fitaovana fanokafana plastika esorinay ny bokotra tokantrano rehetra ary soloinay amin'ilay novidinay ary miverina amin'ny torolàlana mba hamerenantsika ny iPad 2 nosoloinay ny Home Button.
iPad 3: Amin'ny ampahany nesorinay, ny tapany eo aloha, misy ny Home Button, hanamorana ny fanoloana, manafana ny iOpener izahay ao anaty «micro-micro» ary apetraka eo am-pototry ny rindrina eo aloha mba hisolo ny bokotra Home.
iPad 3: Miaraka amin'ny Fitaovana fanokafana plastika (fitaovana hanokafana ny iPad) esorinay amin'ny adiny havanana sy havia ny bokotra Home ny adhesive, atsanganay ireo vakizoro.
iPad 3: Miaraka amin'ireo fitaovana fanokafana plastika esorinay ny bokotra Home manontolo ary soloinay ilay novidianay ary miverina amin'ny torolàlana isika mba hamerenantsika ny iPad 2 nosolointsika ny Home Button.
Tsaroanay fa ity torolàlana ity dia nadika sy namboarina tamin'ny fiteniny avy amin'ny torolàlana ofisialy iFixit. Actualidad iPad dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana ara-batana amin'ny iPad-nao.
Fanazavana fanampiny - Bokotra ao an-trano: Ahoana no ampiarahantsika azy raha tsy mandeha izy? (I)
Loharano - iFixit (I) - iFixit (II)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Amboary ny tenanao iPad (I): bokotra Home
Jarenaguer dia hoy izy:
Valiny tamin'i Jarenaguer
Ny boaty hafatra dia misy ao amin'ny Cydia hampiasa Chat Heads na aiza na aiza